နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားနေမှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး - Yangon Nation News
(၁.၂.၂၀၂၁) မနက်အာရုံမတက်ခင်မှာ မြန်မာပြည်သူများက ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရဆီမှ
နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးချပြီးအဓမ္မလုယူ ခဲ့သည့် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုအား၊
ယင်းနေ့ရက်မှာပင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အမေရိကန်၊ဗြိတိန်အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအစိုးရများက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်သွတ်သွင်းပေးရန်တောင်းဆိုပြီး၊
နိုဝင်ဘာ(၈) ရက်နေ့ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြသခဲ့သည့်မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို လေးစားရန် စစ်တပ်အားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၊
ဒီခြေလှမ်းတွေနောက်ပြန်မဆုတ်ဘူးဆိုရင် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ကျွန်မတို့အရေးယူဆောင်ရွက်မူတွေလုပ်မှာပါ၊
ဟုအမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီး ဂျန်ပီဆာကီက ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြော၍
နိုဝင်ဘာ(၈) ရက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးပမ်းမူမှန်ငမျှ မိမိတို့ဆန့်ကျင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ၊
လူထုရဲ့မဲဆန္ဒကိုလေးစားရမှာဖြစ်ပြီး၊အရပ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြန်လွတ်ပေးရမယ်၊လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၊
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီဂူတာရက်စ် ကလည်း ယခုကိစ္စကိုပြင်းထန်စွာရူတ်ချပြီး၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒူဂျာရစ်က ဒီအခြေအနေတွေက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေအတွက်အထိနာစေတယ်၊
ဂျပန်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ထိန်းသိမ်းခံရသူများအားပြန်လွတ်ပေးရန်တောင်းဆိာပြီး၊ ဒီမိညကရေစီစနစ်ပြန်လည်သွတ်သွင်းပေးရန်မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၊
ဥရောပကောင်စီဥက္ကဌ ချားလက်စ်မီချယ်က အာဏာသိမ်းမူကိုပြင်းထန်စွာ ရူတ်ချပြီး၊
ဘြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာရိုက်စ်ပေနီက “တရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရသော ” အရပ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အခြားလူများကိုပြန်လွတ်ပေးရန်နှင့်အငြင်းပွားမူများကိုဥပဒေတွင်းမှဖြေရှင်းရန်၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာရန် တပ်မတော်ကိုတောင်းဆိုခဲပါတယ်၊
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ထိမ်းလိုက်နာရမည်ဟုမိမိတိဲုယုံကြည်ကြောင်းနှင့်လောလောဆယ်အခြေအနေများအပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊
နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီမိုကရေစီစံနူန်းများကိုလေးစားရန်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံလေးစားရန် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအားတိုက်တွန်းကာ အာဏာသိမ်းခြင်းကို ရူတ်ချလိုက်ပါတယ် ၊
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကနေဒါသံအမတ် ဘော့တ်ရေးက မြန်မာစစ်တပ်သည် ယခုကဲ့သို့အာဏာသိမ်းနိုင်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဤနည်းဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် ၊
တဆက်တည်းပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်၊
(၁.၂.၂၀၂၁) တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူပြီးပြီးခြင်း၊ နေ့ရက်မခြားပါဘဲ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုအချိန်မှာ (၁.၂.၂၀၂၁) စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူပြီးတဲ့နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၄၆) ရက်အတွင်း
လက်နက်မဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြသည့် မိမိတို့မြန်မာပြည်သူများနဲ့ တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်အတွက်အားထားရမည့်ပညာတတ်လူငယ် ဂျင်းဇီ လေးများကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဥပဒေမဲ့ အဆင်ခြင်မဲ့ ကျည်အစစ်ဖြင့်ပစ်သတ်နေသည်မှာ ဦးရေ(၂၀၀) ကျော်ရှိနေပါပြီ၊
ပစ်သတ်ပုံပစ်သတ်နည်းများမှာ ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေများဖြစ်တယ်ဟု နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းများမှ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်၊
တရားဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူများသည်လည်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိနေပါပြီ၊
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီလို့ “ဂလိုဘယ် R2P ” အဖွဲ့က ကမ္ဘာကိုအသိပေးလိညက်ပါပြီ၊
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်ကျုးလွန်မူတွေအတွက် အရေးယူမခံရပဲ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်နေတဲ့အချက်ဟာ အရပ်သားတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်တာတွေ
နောက်ထပ် ပိုပိုပြီး စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ကို ကျုးလွန်လာစေတယ် လို့
” ဂလိုဘယ် R2P ” အဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်၊
အတွဲအမှတ်(၅၆) စောင့်ကြည်ံ့စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးက ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပြုပေးဖို့ ” CRPH ” ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးသံတမန် ဒေါက်တာဆာဆာကလည်း မပြတ်တမ်းပြောဆို တောင်းဆိုနေပါတယ်၊
အာဏာလု စစ်ကောင်စီ၏ တရားစွဲပြုမူနေမှူကို လမ်းမတွေပေါ်မှာ နေ့စဉ်နဲအမျှ အသက်တွေရင်းပြီး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတဲ့ ရဲရင့်လှတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဟန့်တားပိတ်ပင်လို့မရသလို သူ့ကိုလည်းပိတ်ပင်လို့မရဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်
မတ်လ(၁၆) ရက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော်စတင်တို့ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှီဟီးဒေးဆူဂါ နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
မြနာမာစစ်တပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဘို့ကြိုးစားနေတဲ့အပြင်၊
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြနေကြသူတွေအပေါ်မှာလည်း ပြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာ ဖိနှိပ် ဖြိုခွဲနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်၊
ဒါ့အပြင် ဘေဂျင်းအစိုးရဟာ ဟောင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊
ထိုင်ဝမ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီတို့ကို ဖျက်ဆီးနေတယ်၊
နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လည်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာ ပိုင်နက်ချဲ့ထွင်နေတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်က တရုတ်နိုင်ငံကိုထပ်မံပြောဆိုဝေဖန်သွားပါတယ်၊
ဤက ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် တရုတ်ကို မြန်မာ့အရေးမှာလည်းအဲလိုမလုပ်ဖို့၊
မြန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ အမေရိကန်မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၊
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုရဲ့သဘောထားအတိုင်းပူးပေါက်းပါဝင်ပေးလို့ ” Pressure to Compromise “နဲ့တပ်လှန့်သံပေးလိုက်တဲ့သဘောဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်၊
အမေရိကန်က အာရှမဟာမိတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံများကို ခရီးထွက်ဆွေးနွေးညှိနိူင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်၊
Quad အဖွဲ့ဝင် အာရှအင်အားကြီးမဟာမတ်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ဘြတြေးလျ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံများနဲ့မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့၊ဆွေးနွေးမြဲ၊ဆက်လက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနိူင်းနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်အတွင်းမှာလည်း အာဏာလုစစ်ကောင်စီအ့ဝန်ထမ်းအများစု၊ လူမူစီးပွားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုက မိမိတို့ကိုမင်းကျင့်တရားနဲ့အညီ ပြည်သူကို ငဲ့ညှာထောက်ထားမယ့်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လက်တွေ့စစ်ကောင်စီ၏ လုပ်ရပ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သိသာ မြင်သာနေကြပါပြီ၊
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်သံဃနာယကအဖွဲ့မှလည်း ယခုလိုပြည်သူအများကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မူများလုပ်နေသောအခြေအနေ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မဟန အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟူသော ထုတ်ပြန်ချက်သည်လည်း လူမူကွန်ရက်တွင်ပြန့်နေပါတယ်၊
ဥရောပ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပါအဝင်
လက်နက်မဲ့ပြည်သူများအား ကြမ်းကြုတ်ရက်စက် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မူ၊
လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူသင့်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ပြန် ပြောဆိုထားပြီးသည်ကို
သံတမန်ရေးအရဆောင်ရွက်နေတာကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်သွားချင်ပေမဲ့ ၊ အဲသလို မရတော့ဘူးဆိုရင်
ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူလို့ရတဲ့ ပြောဆိုချက်ကို (၉.၃.၂၀၂၁) နေ့ရက်တွင် ” Twitter ”
ယခုမိမိတို့နိုင်ငံ၏ဖြစ်စဉ်သည် မိမိတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားများမှ ” Gen Z ”
များက ရှေ့တန်းတွင် ဦးဆောင်နေကြသော
စစ်တပ်မှနိုင်ငံတော်အာဏာကို မတရားလုယူမူအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေခြင်းကို အင်နဲ့အားနဲ့ ပြည့်စုံသာလွန်မူဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသည်မှာ အားရ ကြက်သီးထလောက်ပါတယ်၊
ဂျင်းဇီများနဲ့အတူ လူရွယ် လူကြီးများ၏ အသက်ပေါင်း(၂၀၀) ကျော်လည်း၊ရက်ပေါင်း(၄၀) အတွင်းပေးခဲ့စွန့်လွှတ်ကျဆုံးခဲ့ကြရပါပြီ၊
လူပေါင်း(၂၀၀၀) ကျော်လည်း မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသည့်အပြင်၊
မိဘများ၏ သတင်းအချက်အလက်မရ ပျောက်ဆုံးနေကြသော သားများ၊သမီးများသည်လည်း ဘယ်၍ ဘယ်ပုံများ ပေါ်လာလေမလဲ ? စိုးတထိတ်ထိတ်ပါ၊
ဘယ်အချိန်မှာများ ကြမ်းတမ်း ရိုင်းပြစွာ ဆဲဆိုပြီး၊ ဥပဒေမဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးမလဲ ?
သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မလဲ ?
မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားစေမူ၊
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအောင်မြင်မူဖြစ်ထွန်းရေးသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး သက်သက်မဟုတ်တော့ပါဘဲ၊
ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပြယုဂ် တစ်ခု၊
ဤသို့သောအခြေအနေ ဖြစ်စဉ်များအားလေ့လာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြ၍
ဗြိတန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံအား ၊
လိုအပ်ပါက ” Pressure to Compromise ”
လူတိုင်း၌အသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်မူခွင့်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချခွင့်ရှိသည်၊ ဟူသောကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို စောင့်ထိမ်းရာရောက်ပြီး၊
လူသားဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများ၏ အသက်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်၊
မိမိတို့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကို မိမိတို့ပြန်လည်ရရှိဘို့ကြိုးစားစွမ်းဆောင်နေမူကို မလျော့စေပါဘဲ၊
နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်နက်ကိုင် အဓမ္မလုယူထားသည့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အား၊
UN အပါအဝင် နိုင်ငံကြီးများက ၊
” Pressure to Compromise”
” Pressure to Resign ”
ဖိအားပေး နူတ်ထွက်စေခြင်းမျိုးလုပ်နိုင်မလား ?
ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ် ဆုံးဖြတ်ပေးကြရပေတော့မည်၊
ပြည်သူသာလျှင် အဓိက ဖြစ်ပေသည်၊